खुशी र निःशुल्क - अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संगीत परियोजना
अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संगीत परियोजना खुशी र स्वतन्त्र
पृथ्वीमा सबै व्यक्तिहरूक
विचार: विश्वका विभिन्न भागका संगीतकारहरूले उनीहरूको मातृभाषामा प्रार्थना मन्त्रा "लोकाह सामस्ता" भिडियो रेकर्ड गर्छन् र हामी यसलाई एकल भिडियो क्लिपमा सम्पादन गर्दछौं।
मिशन: हामी ग्रहको मानिसहरूलाई एकजुट गर्नका लागि सेवा दिन चाहन्छौं, हामी सबै र कुनै पनि परिस्थितिमा उही भाषा बोल्न सक्दछौं र देखाउनुपर्दछ - मानवता, अनुकम्पा र विवेकको भाषा।
कल्पना गर्नुहोस्! केवल एक लाइन "सबै संसारका सबै प्राणीहरू खुशी र स्वतन्त्र होस्" उनीहरूको संस्कृतिका मूल भाषीहरू, सians्गीतकारहरू र ग्रहका विभिन्न भागका गायकहरू द्वारा दर्जनौं विभिन्न भाषाहरूमा गाइन्छ। एउटा शटमा हामी पेरूको चर a्गो देख्दछौं, अर्कोमा भारतीय सितार लगाएर, तेस्रोमा मंगोल म Mongol्गुर, मोरनिकुर, जर्मन वा इटालियनले आफ्ना पाखुराहरू लिएर। र यी सबै व्यक्तिहरू संसारभरि मानिसहरूलाई खुशीको कामना गर्दछन्। राम्रो र प्रभावकारी!
हाम्रो ढाँचा र मिशन पहिले नै प्रख्यात "परिवर्तनको लागि प्ले गर्दै" ढाँचाको साथ मिलेर छन् ।
"लोका समस्थः सुखिनो भवन्तु" एक मन्त्र हो, गौतम बुद्धको वचन।
संस्कृत: लोकाः समस्ताः सुखिनो भव
अर्थ: संसारको सबै प्राणीहरू खुशी र स्वतन्त्र रहोस्।
चार भाषाहरूमा गीतको डेमो संस्करण पहिले नै रेकर्ड गरिएको छ र तपाईं यसलाई सुन्न सक्नुहुन्छ।
परियोजना आयोजकबाट शब्द
"भिडियो प्रोजेक्ट" हेप्पी एण्ड फ्री "को विचार लगभग एक बर्ष पहिले जन्मिएको थियो, उही नामको गीत लेख्ने बित्तिकै, जुन शुरुमा तीन भाषाहरूमा उच्चारण भयो: संस्कृत, अंग्रेजी र रूसी। जे होस्, यो चाँडै नै स्पष्ट भयो कि यो केवल केही ठूलो कुराको शुरुवात हो र यो गीत विश्वभरि सयौं आवाजमा ध्वनि हुनु पर्छ।
धेरै शब्दहरु बिना, यो तुरुन्त हृदय प्रवेश। साँचो करुणाको यो निष्कपट प्रार्थना एकजुट हुन्छ, यसले बाह्य भिन्नताहरूलाई मेटाउँछ र मानव आत्मालाई स्फटिकले पार गर्दछ। र आत्मा सबैको लागि एक हो। यसलाई न त जातीय, राज्य, न धार्मिक सीमा र मतभेदहरू थाहा छ। ”
डेनिल शिरोकोबोरोडोभ , रसियाका संगीतकार, 38 बर्षे , पति र चार बच्चाहरूको बुबा, यात्रु, Snivetvey ब्यान्डका नेता ।
त्यसोभए यदि हामी तपाईंसँग उही लहरीमा छौं भने हामी सुरु गरौं।
परियोजनामा कसले भाग लिन सक्छ?
सबै उमेरका व्यक्ति, राष्ट्रियता र धर्महरू, गायकहरू र संगीतकारहरू दुबै पेशेवर र एमेच्योरहरू यस परियोजनामा भाग लिन सक्छन्।
भाग लिनको लागि, तपाइँले हाम्रो समर्थन ट्र्याकसँगै गाउनु पर्छ "तपाइँको मातृभाषामा" सबै संसारका सबै प्राणीहरू खुशी र स्वतन्त्र होऊन् "भन्ने वाक्यांश वा एउटा वाद्ययन्त्र बजाउन, यसलाई फिल्म गर्न र हामीलाई पठाउनुहोस्। हामी भिडियोहरू चयन गर्नेछौं र तिनीहरूलाई एकल क्लिपमा सम्पादन गर्नेछौं। सबै निर्देशनहरू र अडियो र भिडियोको लागि सिफारिसहरू तल वर्णन गरिएको छ।
फेब्रुअरी १ 15, २०२१ भन्दा अडियो र भिडियो रेकर्ड गर्न हतार गर्नुहोस्। क्लिपको अनुमानित रिलीज मिति: मार्च १, २०२१।
ब्याकिंग ट्र्याकहरू डाउनलोड गर्नुहोस् र साउन्डक्लाउडमा गीतको डेमो संस्करण सुन्नुहोस् ।
स्वरकारहरूले तिनीहरूका मातृभाषामा "सारा संसारका सबै प्राणीहरू खुशी र स्वतन्त्र होऊन्" भन्ने वाक्यांश अनुवाद गर्न र गाउनु आवश्यक पर्दछ, जसको तपाईं एक वाहक हुनुहुन्छ, ईमानदारीसाथ तपाईंको हृदयमा यसका लागि इच्छुक हुनुहुन्छ। सा phrase्गीतिक वाक्यांश आफैँलाई सुरक्षित गर्नु वा यसको धेरै नजिक हुनु महत्त्वपूर्ण छ। कुनै भोक इम्प्रिसिजेसनलाई पनि प्रोत्साहन दिइन्छ। गीतलाई सुरू देखि अन्त सम्म गाउनुहोस् जब तपाईं महसुस गर्नुहुन्छ। गीतको अन्त्यमा, हाम्रो डेमो संस्करण ( lokah-samastah-demo.mp3 ) जस्तै फुसफुस्नुहोस् । तपाईं एकल वा कोरसमा धेरै आवाजहरूमा गाउन सक्नुहुन्छ।
यो राम्रो छ यदि तपाईं गाउनुहुन्छ र वाद्य वाद्य बजाउनुहुन्छ। यो संकेत महत्वपूर्ण छ कि अलग ट्र्याक मा रेकर्ड गर्न।
संगीतकारहरूले गीतमा कुनै पनि भाग सम्पूर्ण वा रेकर्ड गर्न सक्दछन्। यो एकल वा संगत हुन सक्छ। राष्ट्रिय जातीय वाद्ययन्त्रहरू बजाउन, जुन तपाइँको संस्कृतिको संगीत हो।
हामीले समर्थन ट्र्याकहरूको बिभिन्न संस्करणहरू तयार गरेका छौं ।
गायकहरूको लागि त्यहाँ आवाज बिना संस्करण छ ( lokah-samastah-no- आवाज . mp3 )।
एकल उपकरणहरूको लागि, खाली एकल सेक्सनको साथ संस्करण छ ( लोकाः समस्ता-नो-भ्वाईस-नो-फ्लुट्स।एमपी or वा लोका-सामस्ता-नो-फ्लुट्स।एमपी। )।
बासिस्टहरूको लागि हामीले बास बिना संस्करण तैयार गरिसकेका छौं ( लोकाः समस्ता-नो-बास.एमपी ))।
Percussionists को लागी - कुनै ड्रम छैन ( lokah-samastah-no-drums.mp3 )। उही कुञ्जी र टेम्पोमा सबै संस्करणहरू। गीत टेम्पो: ११8 बीपीएम। कुञ्जी: सी नाबालिग। Chords: सी नाबालिग, ई फ्लैट प्रमुख, B फ्लैट प्रमुख, एक फ्लैट प्रमुख।
रेकर्डि audio अडियो
ब्याकिंग ट्र्याकहरू डाउनलोड गर्नुहोस् , हेडफोन प्रयोग गरेर कुनै पनि ब्याकि tra ट्र्याकहरूको लागि एक वा बढी अडियो ट्र्याकहरू पूर्वाभ्यास गर्नुहोस् र रेकर्ड गर्नुहोस्। उत्तम सम्भव स्टुडियो-ग्रेड माइक्रोफोन वा स्टुडियो माइक्रोफोनको नजिक वा रेकर्डिंगका लागि जूम प्रकार रेकर्डर खोज्नुहोस्। पप फिल्टरको साथ आवाज रेकर्ड गर्न यो उचित छ। यदि होईन भने, त्यसपछि माइक्रोफोनबाट आधा मिटरको दूरीमा रहनुहोस्। यदि रेकर्डि street सडकमा छ भने, त्यसोभए यो एक भिजुर प्रयोग गर्न सुझाव दिइन्छ। अडियो ढाँचा: 44100/24 बिट। मोनो वा स्टीरियो उपयुक्तको रूपमा। सकेसम्म धेरै बाह्य आवाज कम गर्न कोसिस गर्नुहोस्। यदि सम्भव छ भने, अडियो फाईलको सुरूवात हाम्रो ब्याकिking ट्र्याकहरूको साथ समिकरण गर्नुहोस् ता कि हामीले कानले डक गर्नुपर्दैन। तपाईको आवाज रेकर्ड गर्नु महत्त्वपूर्ण छ हेडफोनमा ब्याकिking ट्र्याक सुनेर, स्पिकरमा होइन।
भिडियो रेकर्डिंगका लागि सामान्य टेक्निकल दिशानिर्देशहरू: क्यामेराको तेर्सो स्थिति, १ 1920० x १ 1080० पिक्सेल वा अधिक। ट्राइपोडबाट हटाउन सल्लाह दिइन्छ। तपाईं पूर्ण लम्बाई वा कमर-उच्च हुन सक्नुहुन्छ। तपाईं देख्नै पर्दछ, त्यहाँ पर्याप्त प्रकाश हुनु पर्छ। यदि बाहिर शूटी .्ग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तब बिहान र साँझको प्रकाश अझ राम्रो हुन्छ। क्लिप बहुराष्ट्रिय हो, त्यसैले यो वांछनीय छ कि तपाईंसँगै फ्रेममा त्यहाँ केही छ जुन तपाईंको संस्कृति, देश, पहिचान बोल्दछ, जसले फ्रेमलाई राष्ट्रिय स्वाद दिन्छ। यो प्रक्रियासँग सिर्जनशील भई कल्पनाको साथ पुग्न लायक छ।
रेकर्डि After पछि
कुनै पनि फाईल सेयरिंग सेवामार्फत हामीलाई तल सूचीकृत कुनै सम्पर्कमा सामग्रीहरू पठाउनुहोस्। परियोजनाको मुख्य ईमेल lokah.video@gmail.com हो
आफैंको बारेमा जानकारी पनि पठाउनुहोस् (नाम, थर, राष्ट्रियता, निवास शहर, उमेर, पेशा)। केवल जानकारी जुन तपाईं हामीलाई भिडियो क्लिपको उपशीर्षकहरू र क्रेडिटहरूमा प्रयोग गर्न अनुमति दिनुहुन्छ!
निर्माताहरू र मास मेडिया
हामी परियोजनाको व्यापक सम्भावित प्रचारमा रुचि राख्छौं र कुनै पनि सूचना समर्थनका लागि आभारी हुनेछौं। हामीसँग पोस्टर र भिडियोहरू छन् जुन तपाईको सामाजिक नेटवर्कहरूमा ह्याशट्यागहरूसहित पोष्ट गर्न सकिन्छ #lokah_samastah #happy_and_free
तपाईको मातृभाषामा ह्यासट्याग प्रयोग गर्न पनि सम्भव छ।
हामी लडाई देशहरुका जनताको एकीकरण र मेलमिलाप सेवा गर्न चाहन्छौं। इजरायली / प्यालेस्तिनी, रूसी / युक्रेनियन, अज़रबैजानी / आर्मेनियालीहरू, कालो / सेतो आदि एक अर्कासँग शान्तिको यो भजन गाऊन्। तपाईं यसलाई फ्रेममा राष्ट्रिय झण्डाको साथ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंको नाम र राष्ट्रियता उपशीर्षक हुनेछ। यदि फ्रेममा विभिन्न उमेरका व्यक्तिहरू छन् भने यो उत्तम छ: परिवार, बच्चाहरू, अभिभावक।
यसद्वारा हामी यो कुरा सम्झन र पुष्टि दिन चाहन्छौं कि वर्तमान राजनीतिक महत्वाकांक्षा भन्दा उच्च मूल्यहरू छन्, संसारका सबै भाषाहरूमा "प्रेम" र "खुशी" जस्ता शब्दहरूको अर्थ सांस्कृतिक सुपरस्ट्रास्ट्रक्चरको परवाह बिना नै एउटै कुरा हो।
परियोजनालाई समर्थन गर्नुहोस्
यस परियोजनालाई व्यापक प्रचार र आर्थिक सहयोगको आवश्यकता छ। हामी सामाजिक नेटवर्क फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप र टेलिग्राम च्याटहरूमा पोस्टपोष्टका लागि कृतज्ञ छौं। हाम्रो समूह र पृष्ठहरू तल सम्पर्कमा सूचीबद्ध छन्।
यसका साथै प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गर्न हामीलाई एउटा टोली चाहिन्छ।
क्षेत्रीय राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरू, सह-निर्माताहरू
पाठ सामग्रीलाई राष्ट्रिय भाषाहरूमा अनुवादक
ध्वनि ईन्जिनियर, मास्टरि engineer्ग इन्जिनियर
यदि तपाईं यस परियोजनाको लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ भने। खाता विवरण ।
फेसबुक पृष्ठ: fb.com/happyandfreevideo
इन्स्टाग्राम: @ happy_and_free.info
डानिल शिरोकोबोरोडोव, संगीतकार, सह-निर्माता, गीत "हैप्पी एण्ड फ्री" का लेखक
खुशी र स्वतन्त्र हुनुहोस्!
यो नेपालीको लागि स्वचालित अनुवाद हो। हामी अनुवाद त्रुटिहरूको लागि माफी चाहन्छौं। तपाईं यो पृष्ठ सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ